यी युवतीको कारण ४२ वर्ष बन्द रह्यो भारतको यो रेल स्टेसन (भिडियो सहित)
July 5, 2021 3156
भारतको पश्चिम बंगाल`स्थित पुरुलिया जिल्लामा रहेको बगुन`कोडोल रेलवे स्टेसन सन् १९६० मा सञ्चालनमा आएको थियो । सन् १९६७ मा उक्त स्टेसनमा काम गर्ने रेलवे कर्म|चारीले स्टेसनमा महिलाको भूत देखे|को दाबी गरे ।
त्यो अफ|वाह एक कान, दुई कान मैदान हुँदै यत्र`तत्र फैलियो । केही समय`पछि रेल स्टेसनका इञ्चार्ज र उनको परिवारका सदस्य समेत रेलवे स्टेसनकै आवासमा मृ त फेला परेपछि डर फै`लियो । मानिस|हरू त्यो स्टेसनमा भू`तको बास भएको र भुत बेलुकी भएपछि रेलको लिक तथा यत्रतत्र घुम्ने गरेको बताउँथे ।
अन्ततः उक्त स्टेसन|बाट रेल चढ्न र त्यहाँ झर्न पनि मानिस`हरू डराउन थाले । रेल चालक`हरूले समेत उक्त स्टेस`नमा रेल रोक्न छाडे|पछि स्टेसन बन्द भयो । यो स्टेसन पूरै भारतभर चर्चामा थियो । आखिर बन्द भएको ४२ वर्ष|पछि सन् २००९ मा तत्का`लीन रेल|मन्त्री ममता बनर्जीले गाउँलेहरूको सहयोग र आग्रह|मा उक्त रेल स्टेसनको पुनः सञ्चालनमा ल्याइन् ।
अहिले रेल स्टेशन खुल्ला त छ, तर बेलुकी सूर्य अस्ताए|पछि स्टेसनमा रेल चढ्ने, ओर्लने को|ही पनि हुँदैन । अरू त अरू स्टेसनमा रातको समयमा कर्मचारीहरू समेत बस्दैनन् । एजेन्सी
Prevअ’पहरण परेकी सुजिता भण्डारीको श’व झाडिमा फे’ला (भिडियो सहित)
Nextसम्बन्धवि`च्छेद गरेको २ दिन नहुँदै अमिर खानकी नयाँ प्रेमिका सार्व`जनिक
कोरोना वि’रुद्धको खोपको सफल परीक्षण हुँदा सुनको मूल्य घट्यो! आज कतिमा झर्यो? हेर्नुहोस्
जन्मदिनको दिननै मदनकृष्ण श्रेष्ठ सहित उनको परिवारका ५ सदस्यमा देखियो कोरोना
आज जेठ १७ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134676)